Raharaha 4 miliara tao amin’ny « Jirama » : Tsy afa-miala i Mamy Ravatomanga -
AccueilRaharaham-pirenenaRaharaha 4 miliara tao amin’ny « Jirama » : Tsy afa-miala i Mamy Ravatomanga
Ny volana Septambra 2015 no tokony notanana teny amin’ny « Chaine pénale anti-corruption » i Mamy Ravatomanga, hatao famotorona momba ny fakam-bola am-pitaka nataony tao amin’ny Jirama. Tsy nisy asa nataony akory kanefa nahavita nampandoa volabe 4 miliara Ariary ny Jirama tamin’ny orinasany ny tenany. Ny praiminisitra tamin’izany mihitsy no nanome baiko ny Bianco hisambotra azy. Nalama toa ny trondro vaventy foana anefa i Mamy Ravatomanga ka afa-maina.
Mpikambana teo anivon’ny Filan-kevi-pitantanan’ny Jirama izy tamin’izany ( nanomboka 2010) ka tamin’ny alalan’io fahefana ananany io no nanodinany ny hofan’ny milina lehibe miisa 9 ho any am-paosiny. Tsotra ny fandehan’ilay tranga. Rehefa tapitra ny fifanarahana nataon’ny orinasa Hydelec sy ny Jirama ny taona 2010 momba ny fanofana milina mamokatra herinaratra, dia navilin-dRavatomanga Mamy ho any amin’ny tombontsoany ny raharaha. Ny taona 2011 mantsy dia noraisin’ny orinasa maorisianina Société Madagascar Utilities Ltd any Maorisy ny momba an’ireo milina miisa sivy ireo, ka ny mpitantana izany dia tsy iza fa olona akaiky an-dRavatomanga Mamy ihany. Taty aoriana moa dia nanangana ny sampan’orinasany taty Madagasikara, nantsoina hoe Madagascar Utilities Sarlu, ry zareo.
Noho ny pitsopitsony samihafa momba ny fametrahana ireo milina ireo anefa dia taty amin’ny volana Avrily 2014 vao nahavita ny fanaovan-tsonia ny fifanarahana rehetra ny Jirama. Teo vao nahafantatra ny fisian’io orinasa maorisiana io ireo mpiasan’ny Jirama. Raha ny tokony ho izy dia nanomboka tamin’io taona 2014 io vao handoa ny hofan’ireo milina ireo ny Jirama. Tonga tampoka avy any anefa ny faktiora avy amin’ity orinasa maorisianina manana ny sampany teto Madagasikara ity nanome ny mari-bola 4 miliara Ariary tokony haloan’ny Jirama. Hofan’ireo milina teo anelanelan’ny taona 2012 -2013 , hono , ireo. Tsy maintsy nandoa an’ilay sora-bola tany amin’ilay orinasa (Madagascar Utilities Sarlu) ny Jirama avy eo.
Io ilay lelavola 4 miliara Ariary voaresaka ery ambony. Satria tokoa, vao vantany voarotsaky ny Jirama tany amin’io orinasa maorisianina izay an’ny namana akaiky an-dRavatomanga Mamy io ilay volabe dia nafindra haingana tany amin’ny kaontim-bolan’ny orinasa Mmp/Btp ( orinasan-dRavatomanga Mamy, ao anatin’ny Groupe Sodiat). Natao tohatra fiakarana hakan-dRavatomanga Mamy an’ilay volabe 4 miliara Ariary fotsiny araka izany ilay orinasa Madagascar Utilities Sarlu.
Any am-paosin’i Mamy Ravatomanga io volabe io nanomboka teo ary rehefa hitan’ny praiminisitra Ravelonarivo Jean ( Pm tamin’ny taona 2015 ) io raharaha maloto teo anivon’ny Jirama io dia nanome baiko ny hisamborana an-dRavatomanga sy hanolorana azy eny amin’ny “Chaine pénale anticorruption” izy.
Izao raharaha mahakasika an’i Claudine Razaimamonjy izao dia mitarika ny mason’ny Bianco ihany koa hitodika any amin’ity dosie Ravatomanga ity. Raharaha momba ny fandraharahana efa tamin’ny 2013 no hanenjehana an’i Claudine, hoy ny Bianco omaly. Ity koa ny raharaha vao tamin’ny 2015 hanenjehana an’i Mamy Ravatomanga.